Archive du 20180620
Tolon’ny Fanovana Hisy vaovao lehibe anio
Ampian-tafika, tsy ampian-tafika ! Io no azo hamaritana ny tolona eny amin’ny kianjan’ny 13 mey amin’izao taorian’ny fisintahan’ireo depiote sasany.
Imbiky Herilaza Tsy lalàna ny fifanarahana ara-politika
Tena mikorontana tanteraka ny firenena ankehitriny. Nazava ny didy navoakan`ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana ny 25 mey lasa teo.
Rajoelina sy ny MAPAR Nadio ny rano nitana !
Tsy mbola nisy aloha ny fanambarana ofisialy avy amin’ny MAPAR momba ny tsy handraisan’izy ireo anjara intsony amin’ny tolona eny amin’ny 13 mey.
Rivo Rakotovao sy ny HVM Mbola midingin-drambo ihany
Talohan’ny nanendrena ny praiminisitra ny alatsinainy 4 jona, dia nambaran’i Rivo Rakotovao filoha nasionalin’ny antoko HVM omaly, fa nisy ny fifanarahana politika voasonia satria tsy afaka nanendry praiminisitra ny filoha raha tsy nisy izany.
Fanatontosana fifidianana Vonon-kanampy ny Britanika sy ny Afrikanina
Sesilany ny fitsidihan’ny solontenan’ireo firenena vahiny ny praiminisitra vaovao Ntsay Christian, ka ny ambasadaoron’i Grande Bretagne, Philip David Boyle, sy ny solontena manokan’ny filohan’ny vaomieran’ny vondrona Afrikanina (UA),
Mpanisa mponina Misy taraiky ny any Atsimo noho ny asan-dahalo
Nisy ny fihemoran’ny fanaovana ny fanisana fahatelo eto Madagasikara (RGPH3). Tsiahivina fa tokony ho tamin’ny 10 jona teo no tapitra ity fanisana ity saingy noho ny tsy fandriampahalemana, indrindra ny any amin’ny faritra Atsimo tahaka ny any Menabe dia misy ny fiandrasana ny mpanisa nalefa any.
Mondial 2018 Mpilalaon’i Colombie no nahazo karatra mena voalohany
I Carlos Sanchez mpilalaon’i Colombie no nahazo karatra mena voalohany indrindra tamin’ity Mondial 2018 ity ary vao teo amin’ny minitra faha-3 ny lalao nifanandrinany tamin’i Japon no nahazoany izany.
Tsy sahy miseho masoandro
Mbola tsy maina akory ny ravina nihinanana, dia efa rava sahady ny velirano sy ny fanomezan-toky natao teny an-kianja e!
EPS Bacc 2018 Miato kely aloha ny fanatanterahana azy
Namoaka fanambarana hoan’ireo mpiadina sy ireo raiamandrenin’ny mpianatra hanala Bacc 2018, tetsy Analakely omaly talata 19 jona 2018, ry zareo ao amin’ny Acfeeps nosoloin’ny SG-ny tena, Eeotondraza Solomon sy ny sendika Speps
FANAFIHANA TENY ANDOHATAPENAKA
Raikitra ny tifitra izay nahafaty olona tetsy Andohatapekana omaly tamin'ny 7 ora sy sasany hariva.
Delegen’ny mpiasa noroahina Nidinan’ny Fisemare ifotony
Ny 15 desambra 2017 teo no nivoaka ny didim-pitsarana tokony hamerina ny delegen’ny mpiasa eo anivon’ny Central Hotel etsy Tsaralalana,
Kaominina Ambohitrimanjaka Manavao ireo fotodrafitrasa misy ao aminy
Ho fiomanana amin’ny fetin’ny fahaleovantena amin’ny 26 jona ho avy izao dia manavao ireo fotodrafitrasa misy ao aminy ny kaominina Ambohitrimanjaka izay misy fokontany 25.
Fanadiovana faobe Sady miasa no mitaiza vahoaka ny CUA
Teny amin’ny faritra Isotry sy ny manodidina indray no nanohizan’ireo hery velona rehetra avy ao amin’ny Boriborintany voalohany ny hetsika fanadiovana faobe ny andron’ny omaly talata 19 jona 2018.
Permis sy Carte grise biometrika Mbola 30% ireo tsy voavadika
Mbola betsaka ireo olona tsy nahavita namadika ny taratasy fahazoan-dalana mamily fiara sy ny carte grise-ny ho biometrika amin’izao fotoana izao.
Zaitra an-tsena Fotoana tena mampandeha azy izao
Anisan’ny asa tranainy indrindra ny zaitra an-tsena eto an-drenivohitra nefa mbola mampalaza antsika ihany koa. Ankoatra ny eny Ambodinisotry, toerana ahitana betsaka ireo mpanjaitra havanana amin’izany,
Mpitsoa-ponenana Olona 20 isaky ny minitra no mandao ny fireneny
Ny 20 jona no andro iraisam-pirenena ho an`ny Mpitsoa-ponenana, izay mifandray amin'ny fanekena ny Fifanarahana 1951 mifandraika amin'ny sata misy azy ireo.